China Bucket elevator nokwenziwa kunye Factory | IChinatown
I-elevator yethu ye-TDTG yeebhakethi yeebhakethi kunye nezinye zezona zixazululo zezoqoqosho zokusingathwa kwemveliso yegranular okanye yokuphatha. Amabhakethi agxunyekwe kumabhanti athe nkqo ukuhambisa izinto. Izinto zondliwa kumatshini ukusuka ezantsi kwaye zikhutshwa phezulu.
Singumboneleli ohambisa umbane ohambisa oomatshini. I-elevator yethu ye-TDTG yeebhakethi yeebhakethi kunye nezinye zezona zixazululo zezoqoqosho zokusingathwa kwemveliso yegranular okanye yokuphatha. Amabhakethi agxunyekwe kumabhanti athe nkqo ukuhambisa izinto. Izinto zondliwa kumatshini ukusuka ezantsi kwaye zikhutshwa phezulu.
Ezi zixhobo zoluhlu ziza nomthamo omkhulu we-1600m3 / h. Isetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yokugcina impahla yengqolowa, irayisi, imbewu yezityalo zeoyile, kunye nezinye iinkozo. Ukongeza, inokusetyenziselwa umatshini wokulungiselela ukutya okuziinkozo kumzi-mveliso womgubo, umzi-mveliso weerayisi, umzi-mveliso wefula, njalo njalo.
1.Lifti yokutya okuziinkozo inokukuthintela ngokufanelekileyo ukuqokeleleka kweemveliso, ukunciphisa umngcipheko wokwahlulwa kwaye uqalise ngokugqibeleleyo ngebhakethi eligcweleyo kunye ne-1/3 egcwele ingqolowa. Ilifti yebhakethi inokusebenza ngokuqhubekayo phantsi komthwalo opheleleyo.
2. Intloko kunye neebhutsi zecandelo lomatshini ziyothuka ngokupheleleyo kwaye zifakelwe iipleyiti zesikhuseli ezinokuthintelwa.
3. Iingcango zokuhlola ziyafumaneka kumacala omabini entloko nakwiziqendu zebhutsi.
4. Iibhanti zikuluhlu lweerabha ezintathu ngenayiloni kodwa zixhomekeke kumthamo kunye nokuphakama kwesinyusi.
5.Ie-casings zelifti yebhakethi zixhonywe ngoqhagamshelo lwe-flange ngee gasket zerabha, kwaye zinokuchaneka ngokubalaseleyo kunye nokuchaneka.
6. Zonke iiplaleys zilungelelaniswe ngokwamanani kwaye zitshintshiwe, kwaye zigqunywe ngerabha yokuxhathisa okuphezulu ngaphandle kwesilayidi.
7. Le iibheringi pulley zezi umqolo kabini spherical uhlobo self-ulungelelwaniso. Zixinene nothuli kwaye zixhonywe ngaphandle kwendlwana.
8. Inkqubo yokuthatha indawo ibekwe kwicandelo lokuqalisa le-lifti yebhakethi.
9. Sisebenzisa ibhokisi yegiya ekumgangatho ophezulu kunye neemoto zegiya. Ibhokisi yegiya ebunjiweyo iza namazinyo alukhuni kwaye ivalwe ngokupheleleyo, ngelixa inkqubo yeoyile yokuthambisa ioyile yamkelwa. Ibhokisi yezixhobo zeJamani SEW iyafumaneka ukuhlangabezana neemfuno ezizodwa zabathengi.
10. Iseti epheleleyo yeyunithi yokhuseleko yenzelwe ilifti yebhakethi yethu. Umsila ngamnye we-pulley shaft ufakwe isivamvo sesantya kwaye iyunithi yangemva inyuselwe ukuthintela ibhanti ekuweleni ngasemva kwimeko yombane.
11. Iibhakethi zensimbi okanye amabhakethi e-polymeric ziyafumaneka.
Chwetheza Ukuhanjiswa kweRatio Ukukhawuleza (m / s) Umthamo (t / h)
Umgubo Ingqolowa Umgubo (r = 0.43) Ingqolowa (r = 0.75)
TDTG60 / 33 13-29 1.5-2 1.8-3.5 25-35 Ngama-45-70
Egqithileyo Umjikelo weSixokelelwano soThungelwano lweKhonkco
Okulandelayo: Ukuhambisa ityathanga
Ishubhu yokuhambisa i-Tubular
Ukuhambisa iBelt okusha
Umjikelo weSixokelelwano soThungelwano lweKhonkco
Isikhokelo seSilayidi seSilayidi kunye noMoya